Wiil soomaali ah oo Reysulwasaare Erna Solberg kala qeybgaley kulan dood wadaag ah - NorSom News
Wiil soomaali ah oo Reysulwasaare Erna Solberg kala qeybgaley kulan dood wadaag ah
Waxaa jimcihii lasoo dhaafey magaalada Oslo ku qabsoomey kulan dood wadaag ah, kaas oo looga hadlayey sidii qorshe mideysan loogu sameyn lahaa qaabka looga hortagi karo cunsuriyada iyo naceybka, gaar ahaana dhalinyarada.
Kulankan oo ay soo qabanqaabisey wasaarada dhalaanka iyo sinaanta dowlada Norwey(Barne-, likestillingsdepartementet) ayaa waxaa ka qeybgaley reysulwaarada wadankan Erna Solberg, wasiirada dhalaanka iyo sinaanta Solveig Horne iyo waliba dhalinyaro 100 gaareyso oo laga soo xuley dhamaan degmooyinka wadankan Norwey.
Dhalinyarada Panelka dooda fadhiyey ee sida tooska ah dooda ugala qeybqaadanayey Erna Solberg, ayaa waxaa kamid ahaa Maxamed Camaleeti oo ah wiil dhalinyaro soomaali ah oo kulanka ku matalayey ururka Norsk folkehjelp og solidaritetsungdom, qeybtiisa magaalada Fredrikstad. Sidoo kale gabar soomaali ah oo lagu magacaabo Haboon Beegsi oo ka socotey ururka Rødekors, ayaa kamid ahaa dhalinyarada kulankaas dooda ah lagu casuumey.
Isku soo wada duuboo waxaa muuqato in dhalinyarada soomaalida ay marba, marka ka danbeysa si aad ah uga soo dhexmuuqanayaan dhamaan dhinacyada bulshada ee wadankan Norwey.
Halkan ka daawo muuqaalka kulanka dooda Maxamed Calameeti iyo Erna Solberg:
Previous article800 qof oo sharciga lagala noqdey iyada oo 400 kamid ahna la siiyey sharci nooc kale ah
Next articleAisho: Hooyooyinka soomaaliyeed fadhiga haka kacaan oo ha shaqeystaan